शाहरुखलाई फ्यानकाे प्रश्न– नयाँ चलिचत्रकाे घाेषणा कहिले गर्नुहुन्छ ? – Makalukhabar.com
आज तीन सय ९६ स्थानीय तहमा अस्पतालको शिलान्यास हुँदै
बाग्लुङमा गुड्दागुड्दै जल्यो २ सय सीसीको ‘हिरो एक्स प्लस’ मोटरसाइकल (भिडियो सहित)
शाहरुखलाई फ्यानकाे प्रश्न– नयाँ चलिचत्रकाे घाेषणा कहिले गर्नुहुन्छ ?
मकालु खबर	 २०७७ कार्तिक १२ गते प्रकाशित 79
एजेन्सी । बलिउडका सुपरस्टार अभिनेता शाहरुख खान दुई वर्ष यता चलचित्रमा देखिएका छैनन् । न त कुनै नयाँ चलचित्रको घोषणा नै गरेका छन् ।
यसैबीच शाहरुखलाई फ्यानले प्रश्न गरेका छन् । नयाँ चलचित्र कहिले घोषणा गर्ने ? शाहरुखलाई उनका एक जना फयानले सोधे – ‘सर, मेरो जीवनको केवल ५० वर्ष बाँकी छ, त्यतिबेलासम्म तपाइँ आफ्नो नयाँ चलचित्र घोषणा गर्नुहुन्छ ?’
फ्यानको उक्त प्रश्नमा शाहरुखले ट्वीटर मार्फत लेखेका छन् – ‘चलचित्र गर्दागर्दै मेरो जीवनको ५० भन्दा बढी समय बितिसक्याे । पक्कै पनि यहीँ गरिरहेकाे थिएँ अघिल्लो ५० वर्ष र पछिल्लाे ५० वर्षसम्म पनि कृपया तपाईं हेर्दै जानुस् ।’
शाहरुखले यसअघि अनुष्का शर्मा र क्याटरीना कैफसँग चलचित्र ‘जिरो’ मा काम गरेका थिए । उक्त चलचित्र फ्लप भएपछि शाहरुख कुनै पनि चलचित्रमा देखिएका छैनन् । तर, आफ्नो प्रोडक्सन हाउसबाट भने, वेब सिरिज निर्माण गरिरहेका छन् ।
मकालु खबर 242 खबरहरु0टिप्पणीहरू
एक महिनाका लागि सर्‍यो नेकपाको केन्द्रीय कमिटी बैठक